Kashoma Cannabis Makomisheni Anoratidzwa Kudzivirira Covid-19 Utachiona |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Rare Cannabis Compounds Yakaratidzirwa Kudzivirira Covid-19 Utachiona
Essentia Scientific yakatanga muunganidzwa weCBDA uye CBGA zvinongedzo zvinozivikanwa kurapa nekudzivirira akasiyana hutano mamiriro angangosanganisira Covid-19. Kuwedzera uku kunouya zvichitevera ongororo yazvino yakaburitswa ne Journal of Natural Products, iyo yakawana kuti mamwe cannabinoids anobatsira maseru mukuvhara kupinda kwehutachiona hweSARS-CoV-2, kusanganisira dzakasiyana.
Vatsvagiri veOregon State University vakawana kuti maviri cannabinoid acids, CBGA uye CBDA, anosunga kuhutachiona 'spike protein, kudzivirira kupinda muchitokisi uye kudzivirira hutachiona zvachose. Kuwana uku kunonyanya kucherechedzwa zvichipihwa kudiwa kweimwe nzira kana yekuwedzera nzira dzekudzivirira kubva kuCovid-19.
Hemp inobvisa CBD uye CBG yagara ichishandiswa kune avo akasiyana hutano uye hutano mabhenefiti. Zvishoma-zvinozivikanwa acidic makomisheni seCBDA neCBGA zvakanyanya kunetsa kuwana mumusika nekuda kwekuita kwakadzama kunodiwa kuvaparadzanisa. Essentia's patented water-based extraction method inochengetedza CBDA neCBGA mune yavo yepakutanga nekuchena kusvika 99% pasina kushandisa zvinonyungudutsa zvinokuvadza mukuita.
Mabhenefiti ehemp's acidic compounds akawanda. Zvidzidzo zvinonongedza kuCBDA neCBGA senzira dzekurapa dzinoshanda dzemamiriro anosanganisira kusagadzikana, psychosis, kurwadziwa kusingaperi uye kusvotwa, pakati pevamwe.
Uku Ndiko Chaizvoizvo Kupera KweMask Mandate?